Madaxweynaha Jubbaland oo furay Kalfadhigii 3aad ee Baarlamaanka maamulkaas[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Jubbaland oo furay Kalfadhigii 3aad ee Baarlamaanka maamulkaas[Sawirro]
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Isniin ah furay kalfadhigii Sadexaad ee Golaha Shacabka Jubbaland
Kulanka koobad ee KalFadhiga Sadexaad ee Golaha shacabka waxaa maanta goob joog ahaa 52 Mudane oo katirsan Golaha iyadoo sidaas uu kulanka ku furmay.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa qudbad dheer ka jeediyay furitaanka KalFadhiga Sadexaad ee Baarlamaanka.
Amaanku maanta aad buu u wanaagsan yahay arintaasna waxay ku timid dadaal iyo wakhti aan galinay balse waxaa lagama maarmaan ah in aad laftigiinu Bulshada iyo Ciidamada aad sharciyan wacyi galisaan oo aad dadka dhex gashaan” ayuu yiri Madaxweynahu.
Dhamaan xubnaha Golaha Baarlamaanka iyo kuwa Xukuumada waa in aan dareeska wada xirana oo aan hawlgalkaas u wada istaagno Shacab iyo Dowlad” ayuu yiri Madaxweynahu.
Sharciyada dhulka Dowlada ayaa leh mana jirto sabarloog aan ahayn tii Dowladii Siyaad Bare oo shaqaynaysa isla markana dhul lagu haysan karo” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Madaxweyne Gaas oo Arrimaha Tukaraq Kaga Hadlay Shirka Brussels?